EGO iji nweta 10 Nwanyị Bus na togbọala Ọha | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEGO iji nweta ụgbọala 10 nwanyị ọkwọ ụgbọ ala na togbọala Ọha
18 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, Ọrụ, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
ego ndi mmadu nke ndi obia gha enweta ugbo ala nke nwanyi
EGO iji nata 10 Nwanyị Ọkwọ ụgbọ ala maka Publicgbọ njem Ọha; Onye isi obodo Ankara Metropolitan EGO General Directorate mepere ule iji nwude ndị ọrụ ụgbọ ala nwanyị 10 na ụgbọ ala ọha.
10 nwa akwukwo nwa akwukwo ndi oria ndi isi obodo nke tinyere aka na EGO maka oru wuputara iyi na onu.
Ndi nnochita etinyere n’uche izizi ede, EGO 5. Ejiri ya ule nnwale banyere igba uzo na uzo ugbo ala di na mpaghara.
Onye isi nchịkwa EGO Nihat Alkaş, onye kwuru na ndị aga-eme nke ọma na ule ahụ nke ndị isi ọrụ EGO tụlere, ga-agafe usoro nyocha nke ụzọ ịnya ụgbọ elu dị elu, na-akpọ ụmụ nwanyị ndị ọkwọ ụgbọ ala, o kwuru:
Iyla Na iwu nke Mayor anyị Mr. Mansur Yavaş, anyị haziri nnwale a iji nweta onye ọkwọ ụgbọala nke nwanyị 10. Anyị chọrọ iji ụzọ dị iche iche gaa n'ihu site na-eburu mma ụmụ nwanyị n'okporo ámá Ankara. Achọrọ m na usoro a ga-abara ndị EGO na ndị enyi na-aga ule ahụ uru. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala n'ọdịniihu, anyị chọrọ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọkwọ ụgbọ ala. Obi dịkwa anyị ụtọ na anyị kekọrịrị ọ yourụ unu ebe a. ”
Na-echere Onye Nleta YAVAŞ
Defne Durusu, onye ọkwọ ụgbọ ala nke sonyere na ule ahụ, kwuru, “Etinyere m akwụkwọ na nke mbụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala. Enwere m mmasị na ịnya ụgbọ ala. Amụtara m ihe na nke a. Ndị mụrụ m amaghị banyere akwụkwọ ọrụ a. Ọ bụrụ na ewee m n'ọrụ, ọ ga-eju ezinaụlọ m anya. Ad Fadime Özaslan kwuru, orum a na m arụ ọrụ dị ka onye ọrụ. Achọsiri m ike iji nnukwu ụgbọ ala. Ọ ga-amasị m ikele Onye isi Ala Mansur maka inye ụmụ nwanyị ụdị ọrụ a.
Onye ọkwọ ụgbọ ala ọzọ aha ya bụ Burcu Güvercin, onye kwusiri ike na ụmụ nwanyị nwere ike ịme ụgbọ ala na-enweghị nsogbu ọ bụla na ndị isi obodo ukwu na-akwado nghọta a nke na-egbochi ịkpa ókè agbụrụ, kwuru, orum m kwere na ụmụ nwanyị nwere ike ijikwa ọrụ ọ bụla. Ọ ga-amasị m ikele Onye isi obodo anyị Mansur Yavaş maka inye anyị ohere a ..
Nwanyị na-eme nke ọma na-akwọ ụgbọala nke Muğla Metropolitan ın
Onye na-ere Soyer na-agbasa ụgbọala ọkwọ ụgbọ ala nwanyị 100 nwanyị na ESHOT…
Oku ozi oma na Eskisehir ..! Busmụ nwanyị na-akwọ ụgbọ ala…
Ọkwọ ụgbọ ala Ndị Ọkwọ ụgbọ ala na-ahụ maka Ọkachamara Ọzụzụ…
Ationgbọ njem ọha na Antalya Per Kilometer…
Captain Driver nke ọnwa Award ka Hero Driver
Ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ekwu na ọ bụghị ime ihe ike megide ụmụ nwanyị
Njikwa Nchekasị na iwe maka ndị ọkwọ ụgbọala EGO Bus
Ndị nyocha EGO na-enyocha Transportgbọ njem Ọha na saịtị
ESTRAM ga-anata ndị ọrụ 18 dịka ndị ọkwọ ụgbọ ala
Ajuju ajuju maka forzụta Ndi Nkwọ ụgbọ ala 73 na Mersin
Ndị na-anya ụgbọ nwanyị van Van na-atụkwasị obi
EGO Nwanne Nwanyị EGO Nwanyi Ga-ahọrọ